दार्चुला जीप दुर्घटना ११ को मृत्यु : ११ जनाकै सनाखत - Namasteholland, News, Information and Technology
१८ फाल्गुन २०७५, शनिबार १०:१७0245
दार्चुलाको राताकाठामा शुक्रबार राति भएको जीप दुर्घटनामा मृतक ११ जनाकै सनाखत भएको छ ।
सदरमुकाम खलंगाबाट दुहुँ गाउँपालिकाको हिकिला गइरहेको म १ ज २८० नंको जीप दुर्घटनामा परी ११ को मृत्यु भएको थियो भने एक घाइते भएका थिए । दुर्घटनामा ११ को घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । मृत्यु हुनेमा नौ दार्चुला र दुई बैतडीका छन् ।
जीप चालक दीपकसिंह धामी गम्भीर घाइते भएपछि गए राति नै उपचारको लागि भारतको पिथौरागढ सिफारिश गरिएको छ । उनको टाउको र खुट्टामा चोट लागेको स्वास्थ्य सहायक डम्मरदत्त भट्टले जानकारी दिए । चार दिनअघि सोही क्षेत्रमा पहिरोमा परी एकको मृत्यु भएको थियो । पहिरो गएको क्षेत्रमै जिप दुर्घटना भएको हो । जीप झण्डै ५०० मिटर तल महाकाली नदीमा खसेको थियो । घटनास्थल सदरमुकाम खलंगाबाट सात किलोमिटर पर्छ ।
क्षमताभन्दा बढी यात्रु र सामान भएका कारण दुर्घटना भएको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।
जिप दुर्घटनाका सबै मृतकहरुको शव जिल्ला अस्पतालमा राखिएको छ । अहिले अस्पतालमा आफन्तहरुको भीड लागेको छ ।
२ बैशाख २०७६, सोमबार ०९:२२0334
१३ भाद्र २०७५, बुधबार ०९:५७0245
२० माघ २०७५, आईतवार ०९:१३0228
Hey Buddy!, I found this information for you: "दार्चुला जीप दुर्घटना ११ को मृत्यु : ११ जनाकै सनाखत". Here is the website link: https://www.namasteholland.com/%e0%a4%a6%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a5%81%e0%a4%b2%e0%a4%be-%e0%a4%9c%e0%a5%80%e0%a4%aa-%e0%a4%a6%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%98%e0%a4%9f%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a5%a7%e0%a5%a7/. Thank you.